Wararkii ugu dambeeyay dhismo ku dumay Xamar-weyne | Keydmedia
Wararkii ugu dambeeyay dhismo ku dumay Xamar-weyne
Maamulka gobolka Banaadir ayaa la sheegaa in uusan laheyn waaxda hubinta tayada guryaha la dhisayo iyo kuwa qadiimiga ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dhismo saddex biyaano ka koobnaa oo xalay ku dumay degmada Xamar-weyne, kaasoo geystay dhimashada saddex qof.
Dhismahaan oo qadiimi ahaa ayaa ku yaalay xaafada Raqayda, gaar ahaan agagarka Masjidka Marwaazi, ayaa waxaa deganaa saddex Qoys, kuwaasoo gurmad dheer kadib goobta laga soo bad baadiyay qaarkood.
Duqa Muqdisho Cumar Filish iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka ayaa booqday goobta, waxaana bur-burka dhismaha hoostiisa laga soo saaray ilaa 12 ruux oo 5 kamid ah bad qabeen.
Todobo kamid 12 qof oo ku dhaawacmay dhismaha soo dumay ayaa la geeyay Isbitaalada Muqdisho, halkaasoo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo, sida uu sheegay duqa Muqdisho oo goobta shir jaraa’id ku qabtay.
Degmada Xamar-weyn ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka ay ku yaallaan Guryaha qadiimiga ah, kuwaasoo sanado badan dhisnaa, waxaana mararka qaar dhacda in ay soo dumaan xilliyada roobabka iyo dabeylaha jiraan.
0 Comments Topics: dhismo soo dumay farmaajo xamarweyne